आफ्नी आमालाई सम्झिएर रोए रबि लामिछाने ! - News20 Media
February 27, 2020 February 27, 2020 N20LeaveaComment on आफ्नी आमालाई सम्झिएर रोए रबि लामिछाने !
काठमाडौं । बरिष्ठ कलाकार नीर शाहले फिल्म ‘आमा’ उत्कृष्ट भएको बताएका छन् । बुधबार आयोजित ‘आमा’को विशेष शोमा फिल्म हेरेपछि शाहले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘जुन कथामा निर्देशक अगाडि बढ्नुभयो त्यस्तै बनेको छ र त्यही देखाइएको छ फिल्ममा पनि’ शाहले भने ‘जीवन आमा होइन भन्नेका लागि आमा बेग्लै संसार होला । तर, जीवन आमा पनि हो भन्नेहरुका लागि यो क्लासिक फिल्म हो ।’ शाहले ‘आमा’ सबैले हेर्नुपर्ने फिल्म बनेको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए ।चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले छोरी पनि छोरा बनेर देखाउन सक्छ भन्ने कुरा फिल्म उत्कृष्ट तरिकाले देखाएको बताए ।
‘पशुपति प्रसाद’ भन्दा पनि ‘आमा’ उत्कृष्ट लागेको अधिकारीको भनाई रहेको थियो ।त्यस्तै चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ‘आमा’ हेरेर आफु रोएको बताए । ‘फिल्म हेरिरहँदा ५ र १० पटक दिवंगत आमालाई सम्झिए’ रविले भने ‘मेरो जीवनमा पनि फिल्मले उठाएको जस्तै घटना घटेको थियो । म अमेरिकामा हुँदा आमा वित्नुभयो । कागजी झमेलाले म पनि आउन पाइन ।’ रविले आफुलाई विश्वास गर्नेलाई आमा हेर्न समेत सुझाए ।अभिनेत्री ऋचा शर्माले पनि फिल्मले आफुलाई रुहाएको बताउँदा चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्वअध्यक्ष निकिता पौडेलले पनि फिल्म बुलन्द रहेको बताइन् ।
दीपेन्द्र के.खनालको निर्देशन रहेको फिल्म ‘आमा’ले अहिले दर्शक रुवाइरहेको छ । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मलाई समिक्षकले राम्रो भनेपछि दर्शक बढेका हुन् । फिल्मका लागि मल्टिप्लेक्सले पछिल्लो समय शोहरु बढाएका छन् । माउथ पब्लिसिटी उच्च रहेको कारण पनि फिल्ममा दर्शक दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले बताए ।तीन आमाको माध्यमबाट आम मानिसको कथा बाचन गरेको फिल्म ‘आमा’ मा मिथिला शर्मा, सुरक्षा पन्त, सरिता गिरी लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ । फिल्म शर्मिला पाण्डेले निर्माण गरेकी हुन् ।